Maitiro Ekutenda Iwe Pachezvako Uye Kukunda Kuzvipokana - Pfungwa
Maitiro Ekutenda Iwe Pachezvako Uye Kukunda Kuzvipokana
Vanoda kukura kuzvitenda kwako? Iyi ndiyo yakanakisa $ 14.95 yauchamboshandisa.
Dzvanya apa kuti udzidze zvimwe.
Unotenda mazviri here? Iwe unotenda mune kugona kwako kurarama hupenyu hunofadza uye hunobudirira?
Zvinetso zvatinotarisana nazvo zvinogona kuita kuti zvive zvakaoma kuchengetedza maonero akanaka uye hunhu, kunyanya kune vanhu vakambove nazvo hupenyu hwakaoma kana kusangana nezvipingamupinyi zvakawanda.
Kuzvipokana kunopedza zvakawanda zvavasati vamboenda. Sei? Nekuti vanhu vazhinji vanotenda zeve zeve dzekusahadzika dzakadzika midzi mupfungwa dzavo.
Iyi mibvunzo yakaoma iyo inowanzo tungamira munzvimbo dzinonamira, dzinorwadza dzekare dzemunhu.
Hazvishamisi kuti vanhu vasina mutsa vanoudza avo vavanoti vanodisa zvavari haukoshi kana kusakwanisa, kuseka uye kurerutsa zvavanofarira kana zvido zvavo .
Vanhu vane chepfu vanogona zvakare kudzikisira kuvimba nekusambofara kana kugutsikana, zvichiita kuti nyaya yekusagadzikana kwavo vanzwe sekunge kuti hapana chavanokwanisa kuita nemazvo.
Nehurombo, vanhu vakawandisa kwazvo vanoitirwa kushungurudzwa uku uye negativity kwemakore panguva, uye zvinotora mutero nekutora midzi mundangariro dzemumwe uye kukanganisa maitiro avanofunga pamusoro pavo uye kugona kwavo kukanganisa pasirese.
Chero ani zvake anogona kusangana nekusahadzika nezvake kana kugona kwavo, asi ivo vanogona kuchera zvakadzika vosunda kuburikidza nazvo.
Kune nzira dzinoverengeka dzakasiyana dzekuvandudza kutenda kweumwe mukati mavo uye kugona kwavo.
Dzorerazve Kusava Nechokwadi Kwako Mukurudziro
Iko kunaka kwemifungo yedu kunowanzo kusefa muhupenyu hwedu. Funga nezve mifungo yauinayo kana iwe ukatarisana nenguva yekuzvitemba.
Zvinonzwika sei? Ivo vane mutsa, vanotsigira, kana vakanaka here?
Vangangodaro vari mazwi akatsoropodza senge:
'Handina kungwara zvakakwana kuti ndiite izvi.'
“Hapana chikonzero chekuita izvi. Ndichangokundikana. '
'Kurota kwangu kupusa kana kupusa zvakadaro.'
Ichokwadi ndechekuti, mazhinji mazano uye zviito zvinofa zvisati zvayedzwa nekuda kwekusahadzika. Kana munhu achidzokorora zvirevo zvemhando iyi kwavari, zvinobva zvadzika mukati mepfungwa dzavo uye pavanonyanya kuzvitenda.
Panzvimbo iyoyo, isu tinofanirwa kushingairira kutsiva zvirevo izvi nekusimbisa kwakanaka kwerudo, mutsa, uye rutsigiro.
Asi iwe unofanirwa nazvo here?
Zvirokwazvo unoita. Wese munhu anofanirwa kunzwa rudo rune hutano uye kuzviremekedza.
Heano mimwe mienzaniso yekusimbisa iwe yaunogona kushandisa.
Panzvimbo ye: 'Handina kungwara zvakakwana kuti ndiite izvi.'
Zviudze iwe: 'Ini ndakachenjera uye ndinokwanisa, uye ndinogona kubudirira.'
Panzvimbo ye: “Hapana chikonzero chekuita izvi. Ndichangokundikana. '
Zviudze iwe: “Ndinoda kuita izvi nekuti ndinotenda mazviri. Kunyangwe ndikasabudirira, ndinogona kutora zvandakadzidza ndoedza zvakare. '
Panzvimbo ye: 'Kurota kwangu kupusa kana kupusa zvakadaro.'
Zviudze iwe: 'Zviroto zvangu zvakanaka uye zvakakosha seizvo zveumwe munhu.'
Uye ramba uchidaro uine akawanda asina kunaka ekutaura-mapoinzi sezvinobvira.
Izvo zviri nyore, asi hazvisi nyore, uye zvinotora nguva kutanga kutsiva idzodzo, dzisina kunaka pfungwa nepfungwa nyowani, dzakanaka.
Zviyeuchidze Nezve Zvakaitika Kare
Iwe wakabudirira pazvinhu zvakawanda muhupenyu hwako. Pamwe hauvaone sekubudirira, asi ivo vari.
Zvinogona kunge zviri zvinhu zvikuru sekupasa bvunzo kana kuwana a chinangwa chako , kana ivo vanogona kunge vari 'kukunda' kudiki sekuzvimiririra kana kubika chikafu chinonaka.
Munguva dzekusahadzika, ndangariro idzi dzinotiza. Asi zvakadaro isimba rine simba mukubvisa zvakashata kutaura-kwavo.
Nekuburitsa chokwadi chakaomarara nezve izvo zvawakatowana muhupenyu hwako, iwe unopesana nekusahadzika pfungwa dzako dziri kuyedza kukugonesa nezvazvo.
Zvakaoma kwazvo kutenda kuti haukwanise kana uchikwanisa kurangarira nguva yawakanyatsoratidza kugona kwako.
Mune mamwe mazwi, 'Ini handikwanise kuita izvi' pfungwa mupfungwa dzako inobviswa zvombo uchiti, 'Ah, asi ndakwanisa izvi, izvi, uye izvi munguva yakapfuura.'
dombo rinotonhora stunner dombo
Kana Iwe Uchimbonzwa Benzi, Izvi Zvichakutendisa Iwe Kuti Hausi
Maitiro Ekurega Kumhanya Kutiza Kubva Kuneako Matambudziko Uye Uvatarise Iwo NeKushinga Resolve
Iti Aya matanhatu Akanaka Ekusimbisa Mazuva ese Kuvaka Kuzvikoshesa Uye Kuvimba
Kuti Uwedzere Kuzvishingisa Kwako Nekufamba kwenguva, Ita Izvi gumi Zvidiki Zvinhu Nguva Dzose
'Ini Handina Kunaka Chero Chinhu' - Sei Ichi Chiri Chimwe CHIKURU Nhema
Maitiro Ekumira Kunzwa Senge Kukundikana Kana Kurasikirwa
Zvisiyire Kure Kubva kuNegative kana Grey Vanhu
Kune vanhu vazhinji munyika vakamirira kungoisa pasi pfungwa uye zvishuwo zvevamwe.
Ivo vanosiririsa uye kazhinji sekuona vamwe vanhu vachingo shungurudzika sezvavari. Vamwe vari zvinovava uye ndatsva kubva muhupenyu. Vamwe zvavo vanhu vakaipa kana vakaipa vanosarudza kukuvadza nekuparadza.
Kuva uchitenderedza vanhu ava nguva dzose inzira yechokwadi yekuenderera mberi nekuzvitarisira pasi.
Tarisa zvakanaka vanhu vari padyo newe, vanhu vaunoshandisa nguva yako navo. Vangani veava vanhu vanotsigira, zvakanaka pesvedzero muhupenyu hwako?
Aya ndiwo marudzi evanhu vaunoda kushandisa nguva yakawanda navo, uchiisa simba rako mukati kuvaka ushamwari huri nani uye hukama navo.
Vangani vavo vane huipi husipo muhupenyu hwako? Nguva dzose uchikurumidza kutsoropodza, kukuwisira pasi hoko, kana kuratidza izvo zvavanofunga kuti ndizvo zvakashata?
Aya marudzi evanhu anokanganisa kuvimba kwako nekuparadza kugona kwako kufambira mberi. Zvakanaka, iwe ungangoda kubvisa vanhu ava kubva muhupenyu hwako zvakanyanya sezvinobvira, asi izvo hazviwanzo sarudzo
Kana isiri sarudzo kana iwe usiri kuda kutora danho rakakura kudaro, kudzikisira nguva yaunoshandisa navo uye ruzivo rwaunovapa nezve hupenyu hwako kana zvinangwa zvinogona kubatsira. Havagone kushoropodza zvavasingazive.
Kune wechitatu rudzi rwemunhu, iro furati kana grey munhu. Izvo hazvina kunaka kana kushata, ivo vakangoita imomo.
Ivo havaedze chaizvo kuita chero chinhu, havadi chero chinhu chiri nani kwavari kana kwavo kugara zvakanaka, kana kunyatsoita zvakawanda.
Kutora nguva uine vanhu ava kunogona kukunyengerera kuti upinde mukusagadzikana. Panzvimbo pekuenda kunze kuti zvinhu zviitwe, iwe unosangana nezvinhu zvakaita sekuti, 'Sei uchinetseka?'
Zvakanaka, iwe uchada kuzvibvisa pane vanhu ava futi.
Hunhu hwevanhu vaunoshandisa nguva yako uine zvinhu zvine basa.
Ongorora zvakare Zvinorehwa Kukundikana Kwauri
Uri kutya kukundikana ? Kukundikana kunowanzoonekwa seyakaipisisa mamiriro ezvinhu kune chero bhizinesi, asi hazvisi.
Kukundikana nhanho imwe munzira yekubudirira. Chokwadi, panogona kunge paine isinganzwisisike kesi pano neapo apo mumwe munhu akagadzira chirongwa, sarudza chinangwa , uye vakafora vakananga kuchinangwa icho nenyaya shoma, asi handizvo zvinoshanda kuvanhu vazhinji.
Kune vanhu vazhinji, kukundikana inhanho imwe chete munzira yekubudirira. Vanhu vanobudirira vanotarisa kukundikana, vazviudze, 'Zvakanaka, izvo hazvina kushanda!' Uyezve vanoedza nzira nyowani kana dzakasiyana.
Kukundikana kunowanzo shandiswa sechombo nevanhu vasina kunaka nevachena. Ndeipi poindi yekuyedza kana uchingokundikana? Uye iwe unoziva chii, pane tsanga diki yechokwadi muchirevo icho nekuti kuyedza kwakawanda kwekubudirira kunotadza.
Zvisinei, kukundikana hazvireve kuti iwe unorega munzira yako. Hazvireve kupera kune chero chauri kutsvaga.
Izvo zvinongoreva kuti iwe unofanirwa kuve pivot uye utsvage imwe nzira, uchishandisa ruzivo iwe rwawakatowana munzira yako kuti urambe uchimanikidza kubudirira.
Regerera zvaunokundikana. Vaone kwete sekuguma kwerwendo rwako, asi sedombo rekutsika munzira yako yekubudirira.
Vaka Chivimbo Uye Uzvide Nawe
Uri shamwari yako yepamwoyo here? Icho chishuwo chakakwirira, asi chakakosha.
Sezvineiwo, isu taizoda nekutarisira shamwari yepamwoyo zvakanyanya sehama chero ipi zvayo, pamwe zvakanyanya. Tinogona kunge tichitsigira, tichisimudzira, uye tichiedza kuvapo kumunhu iyeye kana vachinge vanzwa kushomeka. Tinenge tichida kuti vazvione ivo pachavo sechokwadi sezvatinovaona.
Uye sezvo iwe uchizenge uchipedzera iyo yakasara yehupenyu hwako iwe pachako, kukudziridza iwo maitiro akadaro iwe pachako kunogona kuita kuti iyo nzira yese yehupenyu ive yakajeka.
Wese munhu ane mhosho dzaanofanirwa kufamba nadzo. Kuzvidemba-chokwadi ndechimwe chezvizhinji, uye hazvimboperi zvachose.
Pachagara paine izwi diki kumashure kwemusoro wako iro rinoti kusahadzika kana kuyedza kukugonesa kuti haukwanise kuzadzisa zvinangwa zvako.
Iwe unokwanisa, iwe unokodzera, uye unokodzera kuwana budiriro zvakangofanana nechero ani zvake munyika.
Kufungisisa kwakatungamirwa uku kunogona kukubatsira here tenda mazviri zvakanyanya ? Tinofunga kudaro.
zvinhu zvekutumira musikana wako kubasa
maitiro ekupindura kudzvinyirira kwepamoyo
chii chakaitika ku ric flair
kunyora tsamba kune waunoda
machengeta sei mukomana anofarira mushure mekunge warara naye